Akụkọ ihe mere eme nke ụlọ alakụba na-acha anụnụ anụnụ na Istanbul | Njem akụkọ
Mariela Carril | 13/01/2022 17:00 | Istanbul, Ihe ị ga-ahụ
Otu n'ime kaadị akwụkwọ ozi kacha ochie nke Turkey bụ ụlọ alakụba Blue a ma ama nke na-emegide mbara igwe Istanbul. Na-adọrọ adọrọ, mara mma, curvy, enwere ọtụtụ adjectives maka ọrụ ụlọ a na nka n'otu oge.
Njem na Istanbul enweghị ike zuru ezu n'ụzọ ọ bụla na-enweghị nleta na ụlọ a bara uru na UNESCO etinyela na ndepụta saịtị ihe nketa ụwa na 1985. Iji chọpụta mgbe ahụ akụkọ ihe mere eme nke Blue Mosque na Istanbul.
Ụlọ alakụba na-acha anụnụ anụnụ
Aha aha ya bụ Ụlọ alakụba Sultan Ahmed ma e wuru ya na mmalite narị afọ nke iri na asaa (site na 1609 rue 1616), n'okpuru ọchịchị nke Ahmed I. Ọ bụ akụkụ nke mgbagwoju anya, nke a na-ahụkarị mgbagwoju anya, guzobere ụlọ alakụba na ihe ndị ọzọ dabere nwere ike ịbụ ụlọ ịsa ahụ, kichin, ebe a na-eme achịcha na ndị ọzọ.
Nke a bụ ili Ahmed m n'onwe ya, enwere ụlọ ọgwụ na kwa a madrasah, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Ihe owuwu ya karịrị ụlọ alakụba Turkey ọzọ a ma ama, Hagia Sophia nke dị n'akụkụ ọnụ ụzọ, ma gịnị bụ akụkọ ihe mere eme ya?
Nke mbụ, a ghaghị iburu n'uche na Alaeze Ukwu Ottoman maara otú e si eme ihe ya na Europe na Asia. Mbugharị ya na kọntinent Europe dị iche iche ma na-atụ egwu, karịsịa esemokwu ya na ọchịchị eze Habsburg.
N'echiche a, esemokwu dị n'etiti abụọ ahụ kwụsịrị na 1606 na ntinye aka nke Sitvatorok Peace Treaty, na Hungary, ọ bụ ezie na taa isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nọgidere na Slovakia.
Emere aka na udo maka afọ 20 na nkwekọrịta ahụ Archduke Matthias nke Austria na Sultan Ahmed I bịanyere aka na ya. Agha ahụ ewetawo ọtụtụ mfu nke ndị ọzọ gbakwụnyere n'agha ha na Peasia, ya mere n'oge ọhụrụ ahụ nke udo Sultan kpebiri ịrụ nnukwu ụlọ alakụba iji megharịa ike Ottoman. Ewubeghị ụlọ alakụba nke alaeze ukwu n'ime opekata mpe afọ iri anọ, mana ego adịghị.
E jiriwo uru agha wuo ụlọ alakụba ndị gara aga, ma Ahmed, bụ onye na-enwebeghị nnukwu mmeri agha, weghaara ego site na akụ nke mba na ya mere, ihe owuwu ahụ mere n'etiti 1609 na 1616 abụghị nke enweghị nkatọ sitere na Muslim. ndị ọka iwu. Ma ọ bụ na echiche ahụ enweghị mmasị ha ma ọ bụ na ha enweghị mmasị na Ahmed I.
Maka ihe owuwu ahụ, a na-ahọrọ ebe obí nke ndị eze ukwu Byzantine guzoro, dị nnọọ n'ihu Basilica Hagia Sofia nke n'oge ahụ bụ isi ụlọ alakụba nke alaeze ukwu na obodo ahụ, na hippodrome, ma ihe ndị dị egwu ma dị mkpa na Istanbul ochie.
Kedu ka ụlọ alakụba Blue dị? O nwere ọnụ ụlọ ise, minaret isii, na ụlọ asatọ ọzọ. Enwere ụfọdụ ihe ndị byzantine, ụfọdụ yiri nke Hagia Sofia, ma n'ozuzu ahịrị na-eso a omenala islam imewe, nnọọ kpochapụwo. Sedefkar Mehmed Aga bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ ya ma bụrụ ezigbo nwa akwụkwọ nke Master Sinan, onye isi ndị na-ese ụkpụrụ Ottoman na injinia obodo nke ọtụtụ ndị sultan.
Ebumnobi ya bụ nnukwu ụlọ nsọ dị ebube. Ọ na-enwetakwa ya! A na-eji taịlị seramiiki ụdị 20 puku Iznik chọọ ime ụlọ alakụba ahụ mma, obodo dị na Turkish n'ógbè Bursa, akụkọ ihe mere eme a maara dị ka Nicaea, na ihe karịrị 50 ụdị na àgwà dị iche iche: e nwere omenala, e nwere na okooko osisi, cypresses, mkpụrụ osisi ... The elu etoju bụ kama-acha anụnụ anụnụ, na karịa 200 yi windo iko na-ekwe ka Itie nke eke ìhè. Ìhè a na-enweta enyemaka site na chandeliers dị n'ime na nke, n'aka nke ya, nwere akwa enyí nnụnụ n'ime ebe ọ bụ na e kwenyere na ọ na-atụ egwu spiders.
Banyere ihe ịchọ mma e nwere amaokwu sitere na Koran nke otu onye na-agụ akwụkwọ kacha mma n'oge ahụ bụ Seyyid Kasin Gubari mere na ala ndị ahụ nwere kapet ndị kwesịrị ntụkwasị obi nyere nke a na-anọchi anya ka ha na-agwụ ike. N'aka nke ọzọ, windo ndị dị ala, nke nwere ike imeghe, nwekwara ihe ịchọ mma mara mma. Onye ọ bụla ọkara dome n'aka nwere ọzọ windo, banyere 14, ma Central dome na-agbakwụnye ruo 28. Mara mma. Ime dị otú ahụ, na-adọrọ mmasị n'ezie.
El mihrad bụ ihe kacha mkpa n'ime, nke e ji ọmarịcha mabụl mee, nke windo gbara ya gburugburu na mgbidi dị n'akụkụ nke nwere taịlị seramiiki nwere ya. N'akụkụ ya bụ pulpit, ebe Imam guzoro na-enye okwuchukwu. Site n'ọnọdụ ahụ, onye ọ bụla nọ n'ime ya na-ahụ ya.
E nwekwara kiosk eze n'otu akụkụ, nke nwere ikpo okwu na ọnụ ụlọ ezumike abụọ nke na-enye ohere ịnweta ụlọ ihe nkiri eze ma ọ bụ hunkâr Mahfil Ogidi mabul na-akwado ya yana mihrab nke ya. Enwere ọtụtụ oriọna na ụlọ alakụba nke na ọ dị ka ọnụ ụzọ eluigwe. Onye ọ bụla bụ eji ọla-edo na nkume di oké ọnu-ahia chọ ya na dị ka anyị kwuru n'elu, n'ime iko containers ị pụrụ ịhụ enyi nnụnụ nnụnụ na ọtụtụ iko bọọlụ ndị furu efu ma ọ bụ zuru ma ọ bụ dị na ngosi nka.
Kedukwa ka mputa dị? Facade bụ yiri nke ụlọ alakụba Suleiman, ma agbakwunyere ha nkuku domes na turrets. The square bụ ogologo dị ka ụlọ alakụba n'onwe ya na nwere ọtụtụ arcades na ebe ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwere ike ịrụ ha ablutions. Enwere a mkpụrụedemede hexagonal etiti na e nwere ụlọ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke na-eme taa dị ka ebe ozi, n'akụkụ Hgaia Sofia. Ụlọ alakụba nwere minarets isii: e nwere anọ na nkuku, nke ọ bụla nwere atọ mbara ihu, na e nwere abụọ ọzọ na njedebe nke patio na naanị abụọ balconies.
Nkọwa a nwere ike ọ gaghị adị oke ka ịhụ ya na mmadụ. Y ị nwere echiche kachasị mma ma ọ bụrụ na ị si n'ọsọ ịgba ọsọ bịaruo nsoma-ọbụ, n’akụkụ ọdịda anyanwụ nke ụlọ nsọ ahụ. Ọ bụrụ na ị bụghị onye Alakụba, ị ga-agakwa ebe a. Ha na-akwado ka ị ghara inye ndị na-atọ ụtọ n'ọnụ ụzọ, na-agbalị ire ihe ma ọ bụ ime ka ị kwenye na ime akara adịghị mkpa. Ọ dịghị otú ahụ. Nọnyere ndị ọbịa ndị ọzọ.
Ndụmọdụ maka nleta:
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga n'etiti ụtụtụ. Enwere ekpere ise kwa ụbọchị wee mechie ụlọ alakụba 90 nkeji na ekpere ọ bụla. Zere Fraịde, ọkachasị.
Ị banye na-enweghị akpụkpọ ụkwụ ma tinye ya na akpa rọba nke ha na-enye gị n'ọnụ ụzọ n'efu.
Ntinye bụ n'efu.
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ị ga-ekpuchi isi gị ma ọ bụrụ na ị nweghị ihe nke gị, ha na-enyekwa gị ihe n'ebe ahụ, n'efu, kpuchie ya. A ga-ekpuchikwa olu na ubu.
N'ime ụlọ alakụba mmadụ ga-agbachi nkịtị, ewerela ọkụ see foto ma ghara ịse foto ma ọ bụ lee anya nke ukwuu na ndị nọ ebe ahụ na-ekpe ekpere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Istanbul » Akụkọ ihe mere eme nke Blue Mosque na Istanbul